အလုပ်သမားသမဂ္ဂကို ဖေါ်ထုတ်ခြင်း၊ စုပေါင်းညှိနှိုင်း အရေးဆိုမှု၊ စုပေါင်းညှိနှိုင်း သဘောတူစာချုပ်။ - MyWage.org/Myanmar
အလုပ်သမားသမဂ္ဂလွတ်လပ်စွာဖွဲ့ စည်းခွင့်၊ သမဂ္ဂတွင်လွပ်လပ်စွာပါဝင်ခွင့်။
အသင်းအဖွဲ့ များလွတ်လပ်စွာဖွဲ့ စည်းခွင့်ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ကအာမခံထားသည်။ သို့ သော်ထိုအခွင့်အရေးသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်ဆန့် ကျင်မှုမရှိစေရ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ နှင့် လူအများ၏ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ကိုထိခိုက် မှုမရှိစေရ။
အရွယ်ရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သူ မည်သူမဆို မိမိလုပ်ကိုင်နေသော သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှိ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။ သမဂ္ဂဆန့် ကျင်ရေးကို ဥပဒေကတားမျစ်ထားသည်။
အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် အလုပ်ခွင်အငြင်းပွားမှုများဖြန်ဖြေရေးဥပဒေ နှစ်ရပ်လုံးတွင် သမဂ္ဂများကို အလုပ်သမား အဖွဲ့ အစည်းများအဖြစ်ဖေါ်ပြထားပြီး၊ ဤဥပဒေအရဖွဲ့ စည်းသောအခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း၊ မြို့ နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း၊ တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ် နှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့ များဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းရှင်များသည် ထိုအဖွဲ့ အစည်းများကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက်အလုပ်သမားများအား ကိုယ်စားပြု သော အဖွဲ့ အစည်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်လိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်တို့ မှတပါး အခြားသောအလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း များ၏ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီများသည် မိမိအဖွဲ့ အစည်းအား သက်ဆိုင်ရာမြို့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၏ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သောပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းများနှင့်တကွတင်ပြရမည်။
အဖွဲ့ အစည်းသည် လုပ်ငန်းဌာန၊ သို့ မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၊ သို့ မဟုတ် လုပ်ငန်းတခု မှ အခြေခံအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်လျှင် အဖွဲ့ ဝင်များက ဖွဲ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်းများကိုလက်ခံသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်ပုံစံကိုပါပူးတွဲ တင်ပြရန်လိုသည်။ အဖွဲ့ အစည်းသည် မြို့ နယ်အဆင့် သို့ မဟုတ် တိုင်းဒေကြီး /ပြည်နယ်အဆင့် ဖြစ်ပါက ထိုပုံစံတွင် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီများကလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ လိုသည်။
မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပြခြင်းလျှောက်လွှာတွင် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီဥက္ကဌ လက်မှတ်ထိုးရမည်။
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပါက အောက်ပါတို့ လိုအပ်သည် -
အဖွဲ့ အစည်းရှိရာ လုပ်ငန်း /အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား
အဖွဲ့ အစည်းရှိရာ လုပ်ငန်း /အလုပ်အကိုင် တွင်လုပ်ကိုင်နေကြသောအလုပ်သမားအရေအတွက်
ဖွဲ့ စည်းမှုကိုထောက်ခံပါဝင်သော အလုပ်သမားများအမည်စာရင်း
မြို့ နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပါက -
ဤဖွဲ့ စည်းမှုကိုထောက်ခံပါဝင်သော အလုပ်သမားအဖွဲ့ များအရေအတွက်နှင့် ရာခိုင်နှုန်း
ထောက်ခံပါဝင်သော အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ထောက်ခံစာ
အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီများကလက်မှတ်ထိုးထားသော ဖွဲ့ စည်းပုံစည်းမျဉ်း
မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်လွှာကို မြို့ နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိမှ စစ်ဆေးကျေနပ်ပြီးသည့်နောက် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် ထံလျှောက်လွာလက်ခံရရှိသည်မှ ရက် (၃၀) အတွင်းဆက်လက်တင်ပြရမည်။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်မှ တင်ပြလာ သောလျှောက်လွှာကိုစစ်ဆေးပြီး မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလက်ခံရန် သို့ မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါက အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြနိုင်သည်။ သို့ မဟုတ် ငြင်းပယ်သည်မှ ရက် (၉၀) အတွင်း အယူခံလွှာကို တရားရုံးချုပ်သို့ တင်ပြနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းတွင်ဖေါ်ပြသည်။
အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ စည်း မှတ်ပုံတင်ရန်အနည်းဆုံးအဖွဲ့ ဝင် (၃၀) လိုအပ်သည်။ အဖွဲ့ ဝင်များသည် ထိုလုပ်ငန်းရှိ အလုပ်သမားအားလုံး၏ ၁၀% ရှိရမည်။
မြို့ နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း ရန် ထိုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားရှိအနည်းဆုံး အခြေခံအဖွဲ့ အားလုံး၏ ၁၀% ပါဝင်ရမည်။
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း ရန်အနည်းဆုံး မြို့ နယ်အဖွဲ့ အစည်းအားလုံး၏ ၁၀% ပါဝင်ရမည်။
အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်ဖွဲ့ စည်း ရန်အနည်းဆုံး တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့စည့်းအားလုံး၏ ၁၀% ပါဝင်ထောက်ခံရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း ရန်အနည်းဆုံး အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်အားလုံး၏ ၂၀% ပါဝင်ထောက်ခံရမည်။
အပိုဒ် - ၃၅၄ (ဂ) ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)
အပိုဒ် - ၂(ဇ) ၊ ၉ - ၁၁ ၊ ၂၉ ၊ ၄၄(ဃ) ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများဥပဒေ (၂၀၁၁)
အပိုဒ် - ၁၁ - ၁၈ ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၂)
ညွှန်ကြားချက်အမိန့် ကြောငြာစာအမှတ် - ၁ ၊ ၂၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၂
အပိုဒ် - ၂(ခ) ၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်း ရေးဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် - ၅/၂၀၁၂)
အလုပ်ခန့် ထားခြင်းနှင့်ပါတ်သက်သည့် အခြေအနေ၊ အချက်အလက် များ၊
- ကို ချမှတ်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းရှင် (အဖွဲ့ အစည်း) နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း (များ) တို့ ကြားစုပေါင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေထုတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သောဖြစ်စဉ်ကိုခေါ်သည်။
စုပေါင်းသဘောတူခြင်း (Collective Agreement) ဆိုသည်မှာ -
အလုပ်သမားများအတွက်ရှိရမည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်းအခြေအနေပြုပြင်ထားခြင်းများ၊ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်အခြေအနေ စီမံထားခြင်းများ၊
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကြား ရှိရမည့်ဆက်ဆံရေးအနေအထားများ၊
အလုပ်ရှင်(အဖွဲ့ အစည်း) နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း(များ) ကြား ရှိရမည့် ဆက်ဆံရေး အနေအထားများ၊
အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း၏ တရားဝင်ရပ်တည်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
အလုပ်သမားများအား လူမှုရေးဘေးအန္တရာယ်များမှ အကာအကွယ်ပေးရန်အာမခံချက်ရရှိစေခြင်း
. . . တို့ အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြားအပြီးသတ်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုသောစာချုပ်ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းရေးဥပဒေကဆိုသည်မှာ -
ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးကော်မီတီ၏ လုပ်ငန်းသည် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အလုပ်သမား (အဖွဲ့ အစည်း) တို့ ကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရေး၊
အလုပ်ခန့် ထားခြင်း ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် အချက်အလက် အခြေအနေများနှင့် ပါတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊
လုပ်ငန်းခွင်တွင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊
. . . တို့ ဖြစ်သည်။
ထို့ ပြင် - ဤကိစ္စသည် သဘောရိုးဖြင့်တောင်းဆိုရန် တာဝန်ရှိခြင်း မဟုတ်သော်လည်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေက ဆိုသည်မှာ - “ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အလုပ်သမားများအကျိုးကျေးဇူးအတွက် အလုပ်သမား အဖွဲ့ အစည်း၏ အကူအညီတောင်းခံမှု (request for help) ကိုတတ်နိင်သမျှကူညီရန်တာဝန်ရှိသည် “
ကာကွယ်ရေးဌာန၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ
စုပေါင်းသဘောတူခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စာချုပ်သက်တမ်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အတည်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း စသည့်ကိစ္စများကို ဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားခြင်းမတွေ့ ရပါ။
အပိုဒ် - (၂) နှင့် (၅) ၊ လုပ်ငန်းခွင်အငြင်းပွားမှုများဖြန်ဖြေရေးဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် - ၅/၂၀၁၂)
အပိုဒ် - ၂(က) အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများဥပဒေ (၂၀၁၁) (ဥပဒေအမှတ် - ၇/၂၀၁၁)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ က လက်နက်မဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်၊ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်တို့ ကိုအာမခံထားသည်။
သပိတ်မှောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ - အလုပ်သမားအချို့ သို့ မဟုတ် အလုပ်သမားအားလုံး၏ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖြင့် -
အလုပ်မဖြစ်အောင်နှေးကွေးလေးလံစွာလုပ်ခြင်း (slow down)
. . . ကို လုပ်ငန်းခွင်တွင်း လူမှုရေး / လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု /၀န်ဆောင်မှုများ ကျဆင်းသွားအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဖေါ်ပြချက်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများသည် မိမိတို့ ၏ အသက်နှင့်ကျန်းမာရေး အပေါ်တွင်ရုတ်တရက် အန္တရာယ်ကျရောက်စေသည် ဟု ယုံကြည်စရာယုတ္တိယုတ္တာရှိသောကြောင့် အလုပ်သမားများက လုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ခွာရန်အခွင့်အရေးကိုအရယူခြင်းကိစ္စမပါဝင်ပါ။
အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတခုရှိ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းသည် အဖွဲ့ ဝင်အများစုဆန္ဒဖြင့် သပိတ်မှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက -
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်
သက်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ သို့ အကြောင်းကြားရန်
သပိတ်မှောက်မည့် ရက်၊ အချိန်၊ နေရာ၊ ပါဝင်မည့်လူဦးရေ၊ သပိတ်မှောက်မည့်ပုံစံ
. . . တို့ ကို (၁၄) ရက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
. . . အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်မဟုတ်သော အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းသည် ၄င်းကိစ္စများကို (၃) ရက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
. . . လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ချုပ်တခုခုတွင်ပါဝင်သော အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းသည် ထိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ ချုပ်နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းရန်လိုသည်။
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု (Provision of minimum service)
ဤကဲ့သို့ စတင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းတို့ သည် သပိတ်စတင်ပြီဆိုသည်နှင့် ယာယီလစ်လပ်သွားမည့် အလုပ်နေရာအမျိုးအစား၊ အရေအတွက်များကို လူစားထိုးရန်ကိစ္စ၊ စက်ရုံတွင်းကျန်ခဲ့မည့် အလုပ်သမားဦးရေတို့ ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသတ်မှတ်ရမည်။ ဤသို့ညှိနှိုင်းမှုသည်မအောင်မြင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာရှိသည့်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။
သပိတ်မှောက်ရန်သဘောတူ /မတူ ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ်သည် တောင်းဆိုသောအလုပ် သမားအဖွဲ့ အစည်းသို့ အချိန်မီအဖြေပေးရန်လိုသည်။
သပိတ်မှောက်မည့်အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းသည် မရှိမဖြစ်သောပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတရပ်ရပ်မှ ဖြစ်နေလျှင် လုပ်ငန်းပြတ်တောက်သွားခြင်းသည် ပြည်သူလူထုတချို့ ၏ အသက်၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး တို့ ကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်ခြင်း -
(၂) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရေး
လုပ်ငန်းရှင်သည် အလုပ်သမား၏ သပိတ်မှောက်ရန်အခွင့်အရေးကို တာမြစ်ခြင်းမပြုရ။
အလားတူပင် . . . ဆန္ဒမရှိသောအလုပ်သမားသည် သပိတ်တွင်မပါဝင်လိုပါက အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း အနေဖြင့် အတင်းအကြပ်ပါဝင်စေရန်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပါ။
တရားမ၀င်သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ စက်ရုံကိုသော့ခတ်ပိတ်ထားခြင်း တို့ ကို ဥပဒေကတားမျစ်သည်။
အပိုဒ် - ၃၅၄(ခ) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)
အပိုဒ် - ၂(ဆ) ၊ အပိုဒ် - ၃၈ - ၅၀ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)
အပိုဒ် - ၄၂ ၊ လုပ်ငန်းခွင်အငြင်းပွားမှုများဖြန်ဖြေရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)
တဘက်လိင်အားထိခိုက်စော်ကားခြင်း ကလေးမွေးဖွားပြုစုခြင်းနှင့်အလုပ် အလုပ်နှင့်လုပ်ခ အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေခြင်း အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခ
Cite this page © WageIndicator 2020 - MyWage.org/Myanmar - အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ